PressReader - Isolezwe: 2018-04-16 - UNcikazi usonga ngokubamba iDowns
UNcikazi usonga ngokubamba iDowns
UMQEQESHI weLamontville Golden Arrows uMandla Ncikazi oyiphini likaClinton Larson ukholwa wukuthi banalo iqhinga elingakha isikhinsi endleleni yeMamelodi Sundowns esesicocweni se-Absa Premiership. Abafana Ba’Style baqhwakele ngamaphuzu angu-52. Umdlalo abazowugijima nabafana Bes’thende kusasa ngo-7.30 ebusuku eLoftus Versveld, basele emuva ngawo. Ngemuva kwawo kuzobe sekusele emithathu ukuthi kuchonywe umpetha omusha weligi kwazise iBidvest Wits ngeke isasivikela isicoco.
Umlando ukhomba ukuthi i-Arrows ingelinye lamaqembu akwaziyo ukufika ePitoli ashiye kukhalwa njengoba yenzile ngesikhathi la maqembu egcina ukuhlangana nyakanye. Bekungumdlalo weNedbank Cup lapho uNduduzo Sibiya eshaye khona ingcwenga yegoli esuke ngokuhlasela izitobha zeSundowns ngesivinini. ISundowns iyaziwa ngokuthi idlala kahle impela kodwa izitobha zayo ijubane abakhwenyana.
“Sinalo iqhinga lokucoboshisa iSundowns. Sizimisele ukwenza lokhu okuhlula amaqembu amaningi. Ngenhlanhla uma sihlaziya izitha sibheka konke ngazo. ISundowns iyiqembu eliphiwe kubadlali abaya phambili ngakho-ke amaqembu amaningi agcina ebheke lokho bese ekhohlwa wokufanele akwenze. Sizoyihlasela ngendlela yethu iSundowns futhi siyazi ukuthi sizoyinika inkinga,” usho kanje uNcikazi ngokukhulu ukuzethemba izolo ekuseni.
Uqhube wathi: “Ngikhuluma nawe nje ngisenkundleni. Abafana bayashibilika. Ubabona ngisho ebusweni ukuthi bawulungele lo mdlalo futhi bayakholwa wukuthi bangawuthola umphumela ofunekayo. Kule midlalo esele sibheke amaphuzu amane kuphela. Ukushesha kwethu siwathole sekungasivulela nokuthi sizibekele imigomo emisha.”
UKudakwache Mahachi, Andile Fikizolo, Danny Phiri, noThabo Nonyane ngeke badlale ngenxa yokulimala. Akekho osesigwebeni samakhadi ngakho-ke basethubeni lokuqhubeka abadlali abanqobele i-Arrows ngo 1-0 kwiCape Town City babuya ekhaya babamba iFree State Stars evuthayo kulezi zinsuku kuba wu 1-1.
“Siyayihlonipha iSundowns kodwa asiyesabi. Njengoba kubukeka sengathi isinegebe lokuphefumula esicongweni, sikhulekela ukuthi iphinde isishintshe isikimu ukuze sibe nethuba elikahle lokuhlakaza umgqigqo. Asikukhohliwe nokho ukuthi kwiSundowns ngisho kungadlala bani, kuzokuba nesikhathi lapho kufanele sisebenzise umfutho omkhulu wokubavimba,” kusonga uNcikazi.